About the project | eNanda Online
Imizamo ye Cultural and Heritage Tourism Programme, Inyuvesi YaKwaZulu-Natali
Yenziwa ngu Sabine Marschall no Niall McNulty
Le sayithi yezokuxhumana iyinqolobane icebile yamasiko kanye namagugu aseNanda (noma Inanda), ilokishi elinomlando owehlukile ngaphandle kwaseThekwini ngaseNyakatho yolwandle lwase South Africa. Izothatha isikhashana yenziwa ngamavolontiya, amalungu omphakathi, abangaphandle abanolwazi kanye nezivakashi esezike zahambela eNanda. Noma ngubani angaletha izindaba azaziyo ngalendawo, okuqoshiwe okufana namakhasethi, CDs, izithombe noma ama vidiyo angaba yiSilungu nomangesiZulu.
Inhloso enkulu yalesayithi ukugcina umulando, izinto ezigamagugu kanye namasiko esimanjemanje ahambisana nobuchwepheshe, ukuze sikwazi ukukubonisa izwe futhi kugqugquzele ezokuvakasha kulendawo. Abantu abasha bayacelwa ukuthi baxoxe nabadala, bathathe izithombe kanye nama vidiyo, kuhlanganisa nezomakhala ekhukhwini babo, nabadala bayanxenxwa ukuthi bacele izingane ukuthi zibasize ekuqopheni izindaba zabo kanye kanye nolwazi lwabo ngamasiko.
Lesayithi kumele ibe ngumthombo wolwazi kubacwaningi kanye nakunoma ubani othanda ukucwaninga ngomlando oqoshiwe kanye nokushintsha kwamasiko. Izindaba kanye nolwazi lwamasiko okuyolethwa lapha kumele kube ngokuncike kakhulu kwizinkumbulo, ukuqonda kabanzi ngamasiko kanye nemibono yanoma ngubani kungakhathaleki ukuthi ukuthi ufundile noma qha. Kumele izindaba zibe yiqiniso ngomlando walendawo ikakhulukazi ngoba loyo oyobe enikela ngolwazi igama lakhe, usuku kanye nendawo kuyoqoshwa phansi.
Kubavakashi nakuzihambeli zakuleli, lesayithi imele isimo okuyiso sangempela mayelana nalokho okungamasiko kanye namagugu abantu baseNanda. Izivakashi ziyagqugquzelwa ukuthi zihambele imigubho nemicimbi yamasiko eyenzeka eNanda nemininingwane enikezelwe yilabo abasinikelele ngolwazi ingabasiza kakhulu abavakashi ekutholeni olunye ulwazi. Abasizi bezivakashi kanye nabaluleki bazo bangabasiza ngolwazi olusha ngabahlali ukuze zilangazalele ukuvakashela lendawo. Izivakashi ziyagqugquzelwa ukuthi zicobelelane ngolwazi ngalokho ezikwaziyo ngalendawo yaseNanda, kungaba okuhle noma okubi inqobo nje uma kuzosiza abasizi bezivakashi ukuthi balungise amaphutha futhi kusizakale nomphakathi ukuze kudaleke amathuba emisebenzi ukuze bakwazi ukukhombisa ngezinto abazenzayo. Lesayithi kuqondwe ngayo ukuthi kusizakale abantu baseNanda ikakhulukazi abase Inanda Heritage Route ukuze bakwazi ukufunda kabanzi ngezokuvakasha futhi basize labo abafuna ukungena kulelibhizinisi.
Ungasilandela kwi Twitter @DurbaneNanda no uthumele i e-mail uthi DurbaneNanda@gmail.com
Sabine Marschall: Okwamanje ngingusolwazi omkhulu wezamasiko nokuvuselela amagugu e-UKZN futhi ucwaningo lwami lubheke kakhulu ekukhumbuleni amagugu namagugu ezokuvakasha. Ungabuka amaphablikheshini ami ku http://za.linkedin.com/in/marschalls. Umnako wami eNanda waqala ngo 1997, ngesikhathi ngibona ukonakala kwendawo kaGandhi nendlu kaJohn Dube okokuqala. Kusukela lapho, okuningi kwashitsha endaweni. Ngangikhona ekukhuphuleni indlela yamagugu eNanda ng 2009/10 ilapho engacabanga izindingo eziningi ezifanele zenzeke, ikakhulukazi ukuqinisekisa ukuthi umphakathi usizakala kakhulu kwezokuvakasha. Le phrojekthi yavela ngoba ngiqaphela ngokuceba kolwazi olukhona emlandweni ocebileyo namasiko endawo kodwa futhi kuncane okukhanga ezokuvakasha. Okubaluleke kakhulu, kunolwazi oluningi, ikakhulukazi olwabanjwa ngabantu abadala, labo abangaqoshwe ndawo. Ngiyacabanga ukuthi eNanda.co.za izowenze imehluko ezimpilweni zabantu. Ngokwami, ukusebenza kelephrojekthi kube umklomelo wohambo ulude!
UNiall McNulty ucwepheshe wezindaba nedijithali, uyamba phambili ekusebenziseni itheknologi entsa ukuqopha nokwabalana ngokuqukhethwe e-Afrika, thizeni ulwazi ngomphakathi, umlando nokuzijwayeza amasiko. Phakathi neminye imiphakathi mayelana nephrojekthi, asebenza noMasipala weTheku eThekwini. Waqala waphatha iphrogramu Ulwazi (www.ulwazi.org), ukuqala kwakhe wayesebenzisa ubucwepheshe beningi njenge bios, wiki (njeng wikipedia) nomakhalekhukhwini, izinto zelabhulali yomphakathi ukuhlangana komphakathi ukuqoqa nokwabelana ulwazi oludala nomlando womphakathi. Ngo 2012 ekubongeni umsebenzi wakhe omuhle wahamba waya eKhenya njengocwepheshe omenyiwe, ephresenta ki standing conference of Eastern, Central and Southern Africa Library and information Association (SCECSAL). Njengobongwayo omele iphrogramu Ulwazi, wathola umklomelo ye-2012 Telkom Highway Africa New Media Awardsemhlanganweni womphakathi ngenxa yobucwepheshe. UNaill waphinde wawina i-Old Mutual Best Green Blog ngemiklomelo yasemzansi Afrika ngo 2010.
Igama lami ngu Ayanda Siphesihle Ngcobo, ngineminyaka engu 21 futhi ngihlala e-Inanda Newtown A. Nginothando ngesamasiko no mlando, ngikholelwa ekutheni kubalulekile njengabantu abasha ukuthi sifunde ngamasiko khona amasiko azokwazi ukudlulela kwabeza emva kwethu. Inanda ilokishi elunomlando omkhulu, kuningi esingakudlulisa kwabanye ngalendawo.
Ngiqeda ukuphothula iziqu zami zemfundo ephakeme, phecelezi i-degree kwi Cultural and Heritage Tourism (ezamasiko, amagugu nezokuvakasha), manje sengenza i-honours kwi Public Policy. Ngaphezu kwalokho ngenza i-internship e-Inanda Seminary Archives and Museum, futhi ngiyi manager of content ye enanda online, okusho ukuthi ngibheka izinto ezibhalwayo ngaphambi kokuba zivezwe kumphakathi. Ngokwenza i-honours yami, ngifuna ukufunda ngokusebenzisana nomphakathi, ukusebenzisana nomphathi ukuze kutholakale intuthuko, ezindaweni ezinjenge Nanda. Ngithanda ukuxhumanisa iPublic Policy nezokuvakasha, njengoba ezokuvakasha zithinta umphakathi.
Loluhlelo lwe enanda online, ngiluthanda ngoba mina ngowase Nanda, okuyindawo enomlando kwezepolitiki, namagugu. Loluhlelo lwenza umlando uthalakale kumphakathi, luphinde lugquqguzele ukufunda nokunikezana ulwazi njengo mphakathi. Luluhlelo luyangifundisa okuningi ngekhaya lami, Inanda. Kubukeka ngathi abantu abasha bawalahlile amasiko kodwa, nge-enanda online, ngithola abantu abasha abathokozelayo ukufunda ngamasiko. Enanda online igqugquzela abantu abasha ukuthi bafunde ngamasiko nomlando.
Igama lami nginguNivan Nayagar. Ngineminyaka engu-23 ubudala, ngingumfundi weMasters eNyuvesi yakwaZulu-Natali, Howard Collage Campus. Ngazalelwa eThekwini futhi ngakhulela kulo leli dolobha elihlekazi. Ngiyaziqhenya ngokuba ngowaseMzansi Afrika futhi ngiphinde ngiziqhenye ngobuNdiya bami. Ngenezifiso ngamasiko namagugu futhi ikakhulukazi ngithanda ukuvakashela izindawo ezinomlando eThekwini nasesifundazweni nje Sisonke. Nginekhono ezilimini, ngafunda isiFrench, isiZulu kanye neHindu kancane esikoleni nasecampasini futhi. Umnako wami kumasiko namagugu kuhlangene nokufisa kwami ulimi iFrench kwangiholela ekutheni ngizinikele ocwaningweni lomntwana wenkosi nendlela yobukhosi futhi nokukhumbula indodana kaNapoleon yesithathu eyashona kabuhlungu eNyakatho yakwaZulu Natali. Okwamanje ngiyingxenye yomsebenzi ka Prof. Marschalls “Enanda” iphrojekthi yesizindalwazi. Ngiyakholwa ukuthi Inanda indawo ephoqayo ukuthi ivakashelwe kulabo abonomnako ekufundeni ngomlando waseThekwini naseMzansi Afraka. Ngiyathemba ukuthi lesisizindalwazi sizovusa ukuqaphela kuleli lokishi futhi ilethe ukuziqhenya kubahlali baseNanda, ukukhuthaza bona ukuthi banake umcebo ngamagugu abazungezile.